iPhone poolu Nsogbu na Solutions I Kwesịrị Ịmara
Poolu ma ọ bụ n'ikuku nke na gị iPhone bụghị onye na-amaghị n'ókèala, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme na-a ọrụ nke iPhone 4. The nnọọ ulo oru imewe nke Apple si iPhones maka akụkụ bụ isi na-agụnye ihe mara mma igwe anaghị agba nchara rim na-arụ ọrụ dị ka ihe na poolu dị ka mma. Ma nsogbu ensues mgbe ọ na-ẹkenịmde ke a ụzọ ọjọọ na-apụta na n'ikuku mbipụta ese ezigbo nsogbu.
Nke a 'Antennagate' e ji mara ndị iPhone 4 bụ ihe ijuanya-atụle otu n'ime ihe ndị kasị mma ka mere ya ụzọ ke 'ekwentị ngwa ahịa'. Dị ukwuu dị ka nke a 'mma mgbaàmà arụmọrụ' mgbe nọ na ala-n'akụkụ aka ekpe nke ekwentị poolu, na-ejizi ya ụzọ ọjọọ nwere ike mee ka na nsogbu galore.
Idozi okwu ndị dị otú ọ dịghị cakewalk ma i nwere ike, ma ọ bụrụ na ị bụ omiiko banyere ya. Ihe i nwere ike ime bụ resotu ka ole na ole jikoro ka n'okpuru:
Gbalịa na-ejide ekwentị na a iche iche n'ụzọ. Nke a bụ 'ndị na-abụghị nke' na ike ga-kpebiri fọrọ nke nta ke a jiffy. Signal n'ikuku mbipụta nsogbu Apple CEO Steve Jobs kwa bụ ndị chere na-ejide ekwentị na a ubé dị iche iche ụzọ pụrụ isi mee ka a oké ngwọta.
Ịzụ a kwesịrị ekwesị akpụkpọ ma ọ bụ ekpuchi iji gbochie aka gị si ugboro ugboro na-emetụ poolu ma na-akpata ama esịn oku ma ọ bụ gradual data transfer gbapụrụ ọsọ bụ ihe ọzọ ị nwere ike họrọ ime. Dị ka Apple na-atụ aro na mbụ na iPhone 4 ọrụ nwere ike ịhụ ha 'ukara ngwọta' n'ụdị na-aga n'ihi a bompa ma ọ bụ ndị ọzọ ikpe. Otú ọ dị, ajụjụ na edemede ebe a bụ dị ka ihe mere ndị brunt nke gwara a poolu nsogbu na-ibu ọrụ nke onye nwe?
Slapping on a duct teepu bụ a họọrọ ụzọ na ọtụtụ ọrụ na-amalite, na-na-arụ ọrụ nke ọma! Ihe ijuanya, gị iPhone na-ga-esi na a ọhụrụ larịị nke n'okporo ámá ike mgbe 'taped-ọnụ' anya e mere.
Gaa maka a 'Scotch teepu' na-anọ n'ebe ndị antennas. Otú ọ dị, na-anọghị nke na, masking teepu, eletriki teepu (nwa), mbukota teepu (doro anya ma ọ bụ aja aja) dị ole na ole ihe ndị ọzọ na-egosi kwesịrị ngwọta. Ọtụtụ ndị na-ewe iwe kwupụta duct etere maka nta nnyapade fọduru bụ nkịtị mgbe ekwentị na-ekpocha kwụsịrị teepu.
Alternatively, a roba gbalaga ọbọp gburugburu nchara rim nke iPhone na-arụ ọrụ ọma dị ka mma.
E nwere kemgbe a nkwa mere site Apple maka a software update mgbe n'idozi poolu nke. N'adịghị ka na-ewu ewu kweere na-agbanwe agbanwe ole na ole Ogwe egosipụta na mgbaàmà mita nke iPhone nwere ike ime ka ihe ka mma mgbe ọ na-abịa poolu ma, eziokwu si, aghọta arụmọrụ nsogbu anabataghị ruo n'ókè. Gịnị bụ eleghi anya na-eme bụ na mgbaàmà nke iPhone ga na-ihere mgbe poolu kpuchie elu.
Ọ bụrụ na, na ike gwụrụ gị na ihe niile nke na-emezughị ịmị mma results, nweta nkwalite ekwentị gị ka ọhụrụ version na idozi n'ikuku mbipụta.
Ihe ndị na-Apple kwesịrị ime
N'elu-e kwuru ngwọta na-obi abụọ adịghị ike a ga-enweta ma onyinye si Apple yiri amiss. N'ihi na a mma mmepụta, Apple nwere ike arụ ọrụ n'ebe na-esonụ:
Ebe ọ bụ na-ejide ekwentị Edemede nsogbu, aka free ngwaọrụ ma ọ bụ iPhone ntị buds pụtara njedebe niile mbipụta. Na ee! Ọ ga-eme na ụgbọala dị ka mma.
Ọ bụ na-eju anya ma Apple chọtara ya siri ike ka nwere ruo ya drawbacks. Nta ọ bụla ọrụ nke iPhone bụ maara nke a nke na-emekpa nke banyere poolu. Ya mere Apple nwere ike ime ka ole na ole bumpers dị ka a free nhọrọ n'oge zuo iji kpuchie poolu kpamkpam. Ọ bụghị na ihe niile ga-adị mma nke ahụ gasịrị, ma ọ dịkarịa ala na ụlọ ọrụ kwesịrị ka elu maka ya.
Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị na ha ewere ogbo na-ere ọhụrụ igwe na a packaged avatar na ụgbọ mmiri ahụ na a doro anya plastic film n'elu ya, iPhones pụkwara ịhụ otu ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na ahụ dum ekwentị yiri a ọjọọ echiche, ọ dịkarịa ala n'akụkụ aka ekpe na oge nke rụpụta.
Redesigning na nkwakọ ngwaahịa yiri oké echiche ma ihe banyere ndị na-eri ihe? Nnọchi bụghị a viable nhọrọ ma ike-atụle ikpe. Ma ọ bụ mma, ka, launching ọhụrụ set sans ya adịghị emezi emezi.
Figuring poolu nsogbu gị iPhone pụtara-arụ ọrụ n'ebe gwara ha. Nhọrọ nke na-eleta a reputed ọrụ center mgbe niile na-anọgide ma ọ dịghị nsogbu agbalị ole na ole jikoro ọma tupu.
Olee ka jikota partitions enweghị Data Loss
> Resource> Utility> iPhone poolu Nsogbu na Solutions I Kwesịrị Ịmara